Satowa Hozuki - चरित्र प्रोफाइल - पालना दृश्य
एक टिप्पणी छोड Satowa Hozuki मा - चरित्र प्रोफाइल
अवलोकन | Satowa Hozuki - चरित्र प्रोफाइल
सतोवा होजुकी तीन मुख्य पात्रहरू मध्ये एक हो कोनो ओटो तोमारे! र श्रृंखला बढ्दै जाँदा एक धेरै मनमोहक चरित्र बन्छ। उनी, जस्तै कुडो र कुराटा कोटो खेल्न मन पराउँछिन् र अन्य मानिससँग मिलेर खेल्न मन पराउँछन्, जस्तै कुराटा र कुडो। कुराटा जस्तै, होजुकी कडा परिश्रम गर्ने छ र कोटोको मोल गर्दछ। एनिमेसको शुरुवातको एपिसोडहरूमा, होजुकी चिसो र असभ्यको रूपमा आउँछिन्, तर पछि एपिसोडहरूमा उनी अन्य पात्रहरू, कुडोमा समेत न्यानो हुन थालिन्। Hozuki एक मनपर्दो चरित्र हो र एक जुन हामी दर्शकहरूको रूपमा सबैको लागि मूल हो।
देखावट र आभा | Satowa Hozuki - चरित्र प्रोफाइल
Hozuki anime मा एक औपचारिक स्कूल केटी छ र धेरै भद्र पहिरन छ। उनीले कुनै अनौंठो वा असहज भावना छोड्दिनिन तर साधारण तर आँखा चिम्चिने तरिकाले लुगा लगाईछिन्। उनको लामो खैरो रेशमी कपाल छ जुन यो सामान्यतया बाँधिन रहन्छ ताकि यो बाटोमा आउनबाट जोगिन, साथसाथै ब्राउन आँखाको एक जोडी। उनीसँग समग्र आकर्षक फिजिक र उपस्थिति छ र यसले शृ on्खला बढ्दै जाँदा उनलाई बढी मनपर्दो बनाउँछ।
पहिले उल्लेख गरिएकी उनी कुडोमा पनि धेरै आकर्षक छिन् तर यो कहिल्यै एनिमेसमा गएको छैन, यदि यो धेरै अस्पष्ट प्रकारले गरिएको छ भने। यो निराशाजनक छ किनभने ईउ वास्तवमै यी दुईलाई एकसाथ हेर्न चाहन्छ तर यो कहिले पनि हुँदैन एनिमे। उनी आफ्नो उपस्थितिमा विनम्रता र अधिकारको भावना दिन्छ र अन्त एपिसोड सम्म यो रहन्छ।
व्यक्तित्व | Satowa Hozuki - चरित्र प्रोफाइल
उनी मा एक रोचक व्यक्तित्व छ एनिमे जसरी उनी दुबै कुरता र कुडो दुबैबाट सम्पर्कमा आएकी थिइनन् उनी अभिनयमा राख्छिन् र कोही कोही शेष नभएको ढोंग गर्छिन्। होजुकी भन्छिन् यसको कारण यो छ कि उनी आफ्नो क्लबमा केटो कतै खेलाडीहरू डराउँदिनन् जो केटीहरू हुन सक्छिन्। त्यहाँ अरु केटीहरू छैनन् किनकी उनीले छापा पार्नु पर्छ र यसको परिणाम स्वरूप उसले चाहेको तरिकाले कार्य गर्दछ, धेरै कुडो र कुराटाको अनिच्छामा।
एनिमी श्रृंखलाको क्रममा तथापि, होजुकीले अभिनय गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न थाल्छ र श्रृंखलामा अन्य पात्रहरूसँग व्यवहार गर्दछ / व्यवहार गर्दछ। र यो किनभने उनीले टोमवर्कको मूल्य बुझेकी छिन् र सँगै काम गर्दा कोोटो खेलिरहेको बेला। त्यो बाहेक होजुकीसँग पनि अरूसँग र अन्य पात्रहरूमा अभिनय गर्ने तरिकामा केही सम्बन्धित व्यक्तिमत्वका गुणहरू छन्। श्रृंखला.
ईतिहास | चरित्र प्रोफाइल - Satowa Hozuki
Satowa कोटाको क्लबमा सामेल हुन्छ सेसन 1 को दोस्रो एपिसोडमा कोनो ओटो तोमारे! र यसमा सम्मिलित हुन आमन्त्रित गरिएको छ जसको कुराटा उनको क्लबमा बस्दा खुसी छ किनकि उसको अनुभव कोतोको बारेमा औसत स्तर भन्दा राम्रो छ।
ईतिहासको हिसाबले हामी होजुकीको बारेमा धेरै देख्न पाउँदैनौं किनकि उनी २ सीजनमा देखा पर्छिन् कोनो ओटो तोमारे! उनीसँग स्क्रिनको समय दुवैको जस्तै छ कुडो र कुराता र ती दुई जस्तै महत्वपूर्ण चरित्र हो। हामी उनको चाप सीजन १ देखि सीजन २ को अन्त्य सम्ममा देख्छौं र यो पक्कै सम्झनाजनक छ। आशा छ हामी सिजन in मा उनको अधिक देख्दछौं यदि त्यो वरिपरि आएको छ, तर अहिलेको लागि हामी यति मात्र भन्न सक्छौं।
चरित्र आर्क | Satowa Hozuki - चरित्र प्रोफाइल
Hozuki को चरित्र को मामला मा हामी वास्तव मा उनको चरित्र एक स्थिति देखि अर्को मा संक्रमण देख्न छैन रूपमा अभाव छ। उनी पहिलेको एपिसोडहरूमा पहिलो सिजनमा चिसो र टाढाको रूपमा सुरु हुन्छन् तर अन्य पात्रहरूमा न्यानो हुन थाल्छिन् र पछिका एपिसोडहरू मार्फत उनले धेरै पात्रहरूलाई न्यानो बनाएकी छिन चिका.
त्यसैले होजुकीको सन्दर्भमा हामीले देख्ने चापले उनको चरित्रलाई पनि सामेल गर्दछ किनकि उनी एक सुन्डेरे प्रकारको चरित्रबाट राम्रो मन पराउने मुख्य चरित्रमा जान्छन् जो दर्शकहरूले मात्र मन पराउँदैनन् अन्य चरित्रहरूले पनि। हामीले देख्न सक्ने व्यावहारिक चापको कुनै पनि प्रकारको सर्तमा हामीसँग यो सबै छ र यो यसमा कसरी छ एनिमे। हामीaमा थप परिवर्तन देख्न सक्छौं सीजन 3, यदि त्यहाँ एक छ।
कोनो Oto Tomare मा चरित्र महत्व! | Satowa Hozuki - चरित्र प्रोफाइल
होजुकीले ठूलो भूमिका खेल्छ यसमा एनिमे र एउटामा main मुख्य चरित्र हो श्रृंखला। उनी एक हुन् जसले कोटो क्लब लिने योजना बनाउँछिन् कि चिका र कुराता नागरिकहरू हुन् र उनी नै उनीहरूलाई निर्देशित गर्ने छिन्। चिका र कुरता उनको स्थितिको कारण उनलाई हेर्छन् तर उनी पनि परिणामको रूपमा नम्र हुन्छिन् र उनीसँग बढी सम्बन्ध राख्न चाहन्छिन। होजुकीबिना कुनै कथा हुने थिएन किनकि होजुकी नागरिकहरूमा जान सक्दिनथ्यो र उनीहरूले गर्ने संकल्प हुँदैन anime श्रृंखला। होजुकीले पहिलो र दोस्रो सत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यदि तपाइँ यहाँ एक एकोन्ड मौसम मा लेख पढ्न चाहानुहुन्छ:
मा तेस्रो मौसम हामीले होजुकीको चरित्र चम्किरहेको देख्न सक्दछौं र अझ बढी प्रचलित हुन सक्दछौं तर त्यसबेला सम्म हामीले पर्खनु पर्नेछ। Hozuki एक महान चरित्र हो र उनको सम्भावना साँच्चै मा अन्वेषण गरिएको छ anime श्रृंखला। अहिलेको लागि मात्र हामी अहिले भन्न सक्छौं। माथिको लेख पढ्नुहोस् यदि तपाईंaको बारेमा अधिक जान्न चाहनुहुन्छ भने सम्भावित मौसम season.
अघिल्लो प्रविष्टि लोरी Kitahara - चरित्र प्रोफाइल
अर्को प्रविष्टि टेकजो कुराटा - चरित्र प्रोफाइल